စိုက်ဆင်းလေပြင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
Downburst seen from the ARMOR Doppler Weather Radar in Huntsville, Alabama in 2012. Note the winds in green going towards the radar, and the winds in red going away from the radar.
စိုက်ဆင်းလေပြင်း တခု ဆိုသည်မှာ ပြင်းထန်သော မြေပြင်အဆင့် လေတိုက်ခတ်ပုံ ဖြစ်ပြီး အပေါ်ရှိ အမှတ်ရင်းမြစ် ‌တနေရာမှ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာကာ ရာဒီယယ်အတိုင်း တိုက်ခတ်ခြင်း၊ တနည်းအားဖြင့် မြေပြင်အဆင့်တွင် ထိတွေ့မိသော အမှတ်မှနေ၍ လားရာ အဘက်ဘက်သို့ မျဉ်းဖြောင့်အတိုင်း ဖြာထွက်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ မကြာခဏပင် ထိခိုက်စေသော လေကို ဖြစ်စေသည့်အခါ၊ လေဆင်နှာမောင်းနှင့် ရောထွေးလေ့ ရှိပြီး၊ ယင်းမှာ အရှိန်မြင့် တိုက်လေသည် အလယ်ဗဟို ပြု၍ လေသည် အတွင်းဘက်နှင့် အပေါ်ဘက်သို့ ရွေ့လျားသည်နှင့် မဆိုင်လှစွာ စိုက်ဆင်းလေ‌ပြင်းသည် ထိုနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် အောက်သို့၊ တဖန် မျက်နှာပြင် ဆင်းသက်သော အမှတ်မှ အပြင်ဘက်သို့ ဖြာထွက်သည်။
စိုက်ဆင်းလေပြင်းသည် မိုးအေးလေ(မိုးရေကြောင့် သိသိသာသာ အေးမြလာသော လေ)တဝိုက်က ဖန်တီးလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး၊ မြေပြင်အဆင့် ရောက်ပြီးနောက် ပြင်းထန်သော ‌တိုက်လေများအဖြစ် အဘက်ဘက်သို့ ပြန့်ထွက်သည်။ ခြောက်သွေ့စိုက်ဆင်းလေပြင်း(Dry downburst)နှင့် စိုစွတ်‌စိုက်ဆင်းလေပြင်း(Wet downburst)ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိသည်။ ပထမတမျိုးသည် မိုးရေနည်းနည်းသာ ပါသော မိုးကြိုးမုန်တိုင်းများနှင့် ပတ်သက် ဖြစ်ပေါ်ပြီး၊ ဒုတိယတမျိုးမှာ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းသော မိုးကြိုးမုန်တိုင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည်။ မိုက်ခရိုလေပြင်း(Microburst)နှင့် မာခရိုလေပြင်း(Macroburst)ဟုလည်း နှစ်မျိုးခွဲပြန်သည်။ ပထမတမျိုးမှာ အလွန့်အလွန် ခွင်ငယ်ပြီး၊ ဒုတိယတမျိုးမှာ အလွန့်အလွန် ခွင်ကြီးသော လေပြင်းများ အသီးသီး ဖြစ်သည်။ နောက်တမျိုးအနေနှင့်၊ အပူလေပြင်း(Heat burst)ဆိုသည်မှာ မိုးရွာခြင်း ကင်းမဲ့နေသည့် ကျဲလွင့်အနားသတ်များနှင့် (နှင်း)မုန်တိုင်း အနားသတ်လိုင်းများ၏ ကျောဘက်ရှိ ဒေါင်လိုက် စီးကြောင်းများက ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူတို့ ဖြစ်ပေါ်ရာတွင် မိုးအေးလေ ကင်းမဲ့သည့်အတွက် အပူလေပြင်းများသည် သိသိသာသာ မြင့်မားသော အပူချိန်ကို ထုတ်ပေး‌သည်။ စိုက်ဆင်းလေပြင်းသည် ဒေါင်လိုက်တိုက်သော လေစောင်း၊ တနည်းဆိုသော် မိုက်ခရိုလေပြင်းကို ဖြစ်ပေါ်လာစေပြီး၊ လေကြောင်း ပျံသန်းရာ၌ အန္တရာယ် ရှိသည်။
၄ လေကြောင်းပျံသန်းမှု အန္တရာယ်
စိုက်ဆင်းလေပြင်းတခုသည် နိမ့်ဆင်းလာသော လေတိုင်တခုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာပြီး၊ မြေပြင်နှင့် ထိတွေ့သော် အရပ်ရှစ်မျက်နှာသို့ ပြန့်နှံ့သွားကာ တနာရီလျှင် ၁၅၀ မိုင် တနည်း၊ တနာရီလျှင် ၂၄၀ ကီလိုမီတာ ကျော်သော မျဉ်းဖြောင့်အတိုင်း တိုက်ခတ်သည့် ဖျက်ဆီးအားရှိ တိုက်လေကို ထုတ်ပေးသည်၊ မကြာခဏပင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများသည် လေဆင်နှာမောင်း တိုက်သည်နှင့် ဆင်တူသော်လည်း စိုက်ဆင်းလေပြင်း တိုက်ကြောင်းကိုမူ ခွဲခြားနိုင်သည်။ ဤသည်မှာ စိုက်ဆင်းလေပြင်း ၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာသည် လေဆင်နှာမောင်းနှင့် လုံးလုံး ကွဲပြားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ စိုက်ဆင်းလေပြင်း ပျက်စီးမှုသည် ဆင်းသက်လာသော လေစိုင်သည် မြေမျက်နှာနှင့် ရိုက်မိသော် ပြန့်နှံ့သွားသောကြောင့် ဗဟိုအမှတ်မှ ဖြာထွက် ပျက်စီးသော်လည်း၊ လေဆင်နှာမောင်း ပျက်စီးမှုကမူ လည်ပတ်တိုက်ခတ်သော လေနှင့်အတူ တသမတ်တည်း တနေရာတည်း၌ ပေါင်းဆုံ ပျက်စီးသည်။ လေဆင်နှာမောင်း ပျက်စီးပုံနှင့် စိုက်ဆင်းလေပြင်း ပျက်စီးပုံကို ခွဲခြားနိုင်ရန်၊ မျဉ်းဖြောင့်တိုက်လေများဟူသော ဝေါဟာရကို မိုက်ခရိုလေပြင်းကြောင့် ပျက်စီးမှု၌ အသုံးချသည်။
စိုက်ဆင်းလေပြင်းသည် မိုးကြိုးမုန်တိုင်း(လေမုန်တိုင်း)မှ သီးခြား ပြင်းထန်သော အောက်စိုက်စီးကြောင်း ဖြစ်သည်။ မိုးရွာခြင်း မရှိ၊ သို့မဟုတ် ရွာသော်လည်း အောက်မရောက်မီ အငွေ့ပျံသွားသော ဗာဂရွာခြင်း ပါဝင်သော စိုက်ဆင်းလေပြင်းကို ခြောက်သွေ့စိုက်ဆင်းလေပြင်းဟု ခေါ်ပြီး၊ ရွာကျခြင်း လိုက်ပါလာသည့် ဟာကိုမူ စိုစွတ်စိုက်ဆင်းလေပြင်းဟု ခေါ်သည်။ စိုက်ဆင်းလေပြင်း အများစုသည် ခွင်အားဖြင့်၊ ၄ ကီလိုမီတာ (၂.၅ မိုင်) ထက် နည်းသော်၊ ၎င်းတို့ကို မိုက်ခရိုလေပြင်းဟု ခေါ်သည်။ ခွင်အားဖြင့် ၄ ကီလိုမီတာ (၂.၅ မိုင်) ထက် ကြီးသော စိုက်ဆင်းလေပြင်းများကို တခါတရံ မာခရိုလေပြင်းများဟု ခေါ်သည်။ စိုက်ဆင်းလေပြင်းများသည် ‌ကြီးမားသော ဧရိယာပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင်သည်။ အလွန်အကြူး ဖြစ်စဉ်များတွင်၊ ဒယ်ရချို ခေါ်သော ကြီးမားကျယ်ပြန့်ပြီး အလျားလိုက် တိုက်ခတ်သော လေမုန်တိုင်း တမျိုးသည် ၃၂၀ ကီလိုမီတာ (မိုင် ၂၀၀) ကျယ်ပြီး၊ ၁၆၀၀ ကီလိုမီတာ (မိုင် ၁၀၀၀) ရှည်သော ဧရိယာကြီးကို ခြုံငုံနိုင်ပြီး၊ ၁၂ နာရီထက် ပို၍ ကြာရှည် တိုက်ခတ်နိုင်ကာ၊ သိပ်သည်းသော မျဉ်းဖြောင့် တိုက်လေအများစု မှ အချို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည် မှန်သော်လည်း၊ ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပုံသည် စိုက်ဆင်းလေပြင်းများနှင့် အတန်ငယ် ကွဲပြားသည်။
မျဉ်းဖြောင့်‌တိုက်လေများ(မိုးသက်လေပြင်းနှင့် ပရေရီဟာရီကိန်းများဟုလည်း သိ)သည် အလွန် ပြင်းထန်သော လေများ ဖြစ်ပြီး၊ လေဆင်နှာမောင်းများ တိုက်ခတ်ခြင်းကြောင့် လည်ပတ် ပျက်စီးသော ပုံစံမဟုတ်ဘဲ ပျက်စီးသော တိုက်လေများ ဖြစ်သည်။ စိုက်ဆင်းလေပြင်းများသည် မိုးကြိုးမုန်တိုင်းကြောင့် အန်ထွက်လာသော လေပြင်းစီးကြောင်းကြောင့် အဖြစ်များသည် တနည်း၊ မိုးကြိုးမုန်တိုင်းတခုမှ စိုက်ဆင်းလေပြင်းမှ အရင်းခံသည်။ ဤ ဖြစ်ရပ်များသည် လေဆင်နှာမောင်း မတိုက်သည့်တိုင် ဂရုပြုလောက်သော ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်စေသည်။ တိုက်လေသည် တနာရီလျှင် ၁၃၀ ကီလိုမီတာ (၈၀ mph) ထိ ရောက်နိုင်ကာ အချိန်အတိုင်းအတာ မိနစ် နှစ်ဆယ် ကြာတတ်သည်။ ဤသို့ စိုက်ဆင်းလေပြင်း တိုက်ခတ်သော ဖြစ်ရပ်များသည် မတည်ငြိမ်မှုများ မြင့်တက်နေပြီး၊ ရာသီလေစီးကြောင်းများသည် တိုင်းပြည်ကို တကျော့ပြန် ဖြတ်သန်းလာတတ်သည့် အချိန် နွေဦးရာသီ၌ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်ကို အများအားဖြင့် တွေ့ရသည်။ ဒယ်ရချိုပုံပန်းနှင့် မျဉ်းဖြောင့်တိုက်လေများ ဖြစ်ရပ်သည် ပုံမှန် ဖြစ်နေကျ လေဆင်နှာမောင်း တောင်ကြား( အရှေ့မြောက် အမေရိကန်/ကန်ကြီးဒေသနှင့် တောင်ကနေဒါတလျှောက်)၏ အပြင်ဘက် ပတ်ဝန်းကျင်၌ ဖြစ်ပွားတတ်သည်လေ။
မျဉ်းဖြောင့်တိုက်လေများသည် ပင်လယ်ဆိုင်ရာ အကျိုးအမြတ် ပျက်စီးခြင်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။ လှေငယ်၊ လှေလတ်နှင့် ရွက်လှေများသည် ဤမိုးလေဝသ ဖြစ်စဉ် ကြောင့် အန္တရာယ် တွေ့နိုင်သည်။
စိုက်ဆင်းလေပြင်း ဖြစ်လာပြီ ဆိုလျှင် မိုးသီးကြွေခြင်း၊ ပိုခြောက်သော လေမှတဆင့် မိုးသီးမိုးပေါက်ကြီးများ ကျလာခြင်းနှင့် စတင်သည်။ ၎င်း မိုးသီးများနှင့် မိုးပေါက်ကြီးများသည် ပတ်ဝန်းကျင်လေကို သိသာစွာ အေးစေကာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်လေမှ အောင်းပူကို ဆွဲယူပြီးနောက် မိုးသီးများက အရည်ပျော်ပြီး၊ မိုးပေါက်များက အငွေ့ပျံသည်။ ပိုအေးသော လေသည် ၎င်းဝန်းကျင်ရှိ ပိုနွေးသော လေထက် သိပ်သည်းဆ များရကား၊ မြေပြင်သို့ နိမ့်ဆင်းသည်။ လေအေးသည် မြေပြင်နှင့် ထိတွေ့သော် ပြန့်ထွက်သွားပြီး၊ မီဆိုစကေး လေစီးကြောင်း တခုကို လေပြင်းစီးကြောင်း တခုအဖြစ် တွေ့နိုင်သည်။ ထိုအခါ စိုက်ဆင်းလေပြင်းနှင့် ကပ်လျက်ရှိသော ဒေသများသည် အမြင့်မားဆုံး လေတိုက်ခြင်းနှင့် မိုးရွာခြင်းကို ကြုံတွေ့ရပေမည်။ မိုးအေးလေသည် ထရိုပိုစဖီးယားအလယ်လေထုမှ ကျဆင်းလာခြင်းလည်း ဖြစ်သောကြောင့်၊ အပူချိန် ရုတ်တရက် သိသာစွာ ကျဆင်းလာသည်ကို သတိပြုမိလိမ့်မည်။ မြေပြင်နှင့် ထိခတ်မှုကြောင့် ပန်ကာကဲ့သို့ လည်ထွက်ပြီး မိုက်ခရိုလေပြင်း၏ အဖျားအနားတွင် များသောအားဖြင့် တွေ့ရလေ့‌ရှိသော သိသာထင်ရှား ခွေလိပ်ပုံပန်းကို ဖြစ်ပေါ်စေရာ အားများ လျင်မြန်စွာ ဆုံးရှုံးသည်။ စိုက်ဆင်းလေပြင်းသည် မုန်တိုင်းအနားသတ်လိုင်းများ ဖြစ်ခြင်းနှင့် ဒယ်ရချို ဖြစ်ရပ်များမှ လွဲလျှင် ခါတိုင်း မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် ပြိုကွဲသွားတတ်သည်။ တိုက်ခတ်သည့် သက်တမ်းတိုတောင်းသော်လည်း၊ မိုက်ခရိုလေပြင်းသည် လေကြောင်းပျံသန်းမှုနှင့် အိုးအိမ်များကို ဘေးဖြစ်စေပြီး၊ ဖြစ်ရာဒေသတွင် အကြီးအကျယ် ပျက်စီးစေလိမ့်မည်။
ထူးခြားပြီး ဖြစ်ခဲလှသော စိုက်ဆင်းလေပြင်း တမျိုးမှာ အပူလေပြင်း ဖြစ်ပြီး၊ ယေဘုယျအားဖြင့် မုန်တိုင်း၏ သေခါနီး အနားသတ်လိုင်းများ သို့မဟုတ် ကျဲလွင့်အနားသတ်၏ ကျောဘက်တွင် ဖြစ်ပြီး၊ အလွန်မြင့်သော အမြင့်တီကျူမှ ဆင်းသက်လာ၍ ဖိသိပ်ခံရသော အပူနှင့် ရွာသွန်းအငွေ့ပျံသော လေထုမှ ဖြစ်ပေါ်သည်။ အပူလေပြင်းသည် အဓိကအားဖြင့် ညပိုင်းတွင် အဖြစ်များကာ၊ တနာရီ ၁၆၀ ကီလိုမီတာ (၁၀၀ mph) ကျော်သော တိုက်လေကို ထုတ်ပေးနိုင်ပြီး၊ လေခြောက်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း ဝိသေသ ရှိရကား၊ မျက်နှာပြင်အပူချိန်ကို ၃၈ °C (၁၀၀ °F) ထိ ရုတ်တရက်မြင့်တက်စေကာ ရံခါ နာရီပေါင်းများစွာ ကြာနေတတ်သည်။
စိုက်ဆင်းလေပြင်း အထူးအားဖြင့် မိုက်ခရိုလေပြင်းသည် ဤသည်ကြောင့် ဖြစ်လာသော ပြင်းထန်သော ဒေါင်လိုက် လေစောင်းများကြောင့်၊ တက်ဆင်း လုပ်သော လေယာဉ်များကို တရားလွန် အန္တရာယ် ရှိစေသည်။ ပျက်ကျသေဆုံးမှု အတော်များများသည် စိုက်ဆင်းလေ‌ပြင်းကြောင့် ဖြစ်ရသည်တည်း။
↑ "Oklahoma "heat burst" sends temperatures soaring"၊ USA Today|1999-07-08၊ 8 July 1999။9May 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 25 December 1996။
↑ NASA Langley Air Force Base.
University of Illinois WW2010 Project Archived 24 March 2017 at the Wayback Machine.
Downburst event ~ Denton County, Texas Archived 13 June 2017 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စိုက်ဆင်းလေပြင်း&oldid=739273" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ မတ် ၂၀၂၂၊ ၂၃:၁၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။